दमौली अस्पतालका प्रमुख पौडेल र कार्यालय सहयोगीलाई कोरोना संक्रमण
दमौली , १८ असोज
तनहुँको सदरमुकाम दमौली स्थित जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत दुई जनालाई कोरोना संक्रमण भएको छ ।
कोरोना संक्रमण हुनेमा दमौली अस्प्तालका प्रमुख डा. सुनिल पौडेल र कार्यालय सहयोगी रहेका छन् । केही दिन अगाडि राजधानीबाट फर्किएका डा . पौडेलको शनिबार मात्र स्याब परीक्षण गरिएको थियो । आफूले सर्तकता अपनाउँदा अपनाउँदै पनि संक्रमण भएको डा. पौडेलले बताए । कोरोना संक्रमण देखिएका डा. पौडेल क्वाटरमा आइसोलेसनमा बसेका छन् ।
त्यस्तै डा. पौडेल सगै अस्पतालमा कार्यरत एक कार्यालय सहयोगीलाई समेत कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ । ति कार्यालय सहयोगी आइसोलेसनमा अस्पतालका तर्फबाट खटिएका थिए ।
कोरोनाको संक्रमण देखिएसगै डा. पौडेलले आफ्नो सम्र्पकमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीहरुलाई सर्तकता अपनाउन आग्रह गरेको प्रमुख डा. पौडेलले बताए । त्यसमा पनि दुई जना चिकित्सकलाई सेल्फ आइसोलेसनमा बस्न सुझाव दिएको समेत डा. पौडेलले बताए ।
अस्पतालका प्रमुख डा. पौडेल लगायत कार्यालय सहयोगीलाई कोरोनाको संक्रमण देखिए सगै अन्य स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरुको स्याब परीक्षणको तयारी भईरहेको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष प्रदीप अधिकारीले बताए । अध्यक्ष अधिकारी जतिसक्दो छिटो स्याब संकलन कार्य अगाडि बढाईने बताउँछन् ।
Seimadidaily (सेतीमादी) October 4, 2020 October 4, 2020
Previous Previous post: तनहुँमा समुदायमा व्यापक बन्दै कोरोना संक्रमण एकै दिनमा १४ जनालाई संक्रमण
Next Next post: दमौली अस्पतालका प्रमुख पौडेल सहित कार्यालय सहयोगीलाई कोरोना संक्रमण
काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पाैडेललाई प्रहरीले यसरी धरपकड गरेकाे थियाे ।तस्बिर प्रकाश अधिकारी ।सेतीमादी ।
वरिष्ठ नेता पौडेल रिहा
तरुण विभागद्धारा घटनाको निन्दा : पतन उन्मुख र भ्रष्ट सत्ताको बलमा सिर्जना गर्न खोजिएको अराजक गतिविधी हो–केन्द्रीय सदस्य भण्डारी
वरिष्ठ नेता पौडेल गिरफ्तार
पुल क्षेत्रमा निशेष आज्ञा